Inyama yenkonyana, ngokungafani yengulube, akuyona kuphela esiphundu, kodwa futhi uhlobo ewusizo inyama, ngenxa yokuqukethwe yayo ongaphakeme amafutha. Kodwa izitsha aphume ke (like kusuka kunoma iyiphi inyama) kufanele uzilungiselele kahle usebenzisa izinongo ezifanele. Kuphela kulesi simo umphumela akuyona nje okunempilo nokunomsoco, kodwa futhi okumnandi. Abanye besifazane abazi kulokho ifomu kuhle inyama yenkonyana. Bhaka kuhhavini ezimbalwa zalo alinge, bekholelwa ukuthi eyosula inyama elukhuni. Kodwa eqinisweni, uma marinate kahle futhi ngokukhalipha ukhethe imodi lokushisa, kuvela ngempela ngobumnene, okumnandi nokwanelisayo.
Inyama yenkonyana nge asithena
Ukuze silungiselele lokhu dish uzodinga izingcezu 10 asithena ngaphandle imbewu, usawoti, pepper kanye, yebo, lo inyama yenkonyana. Ubhake kuhovini kungaba lonke isinkwa, kodwa kungcono uthathe izingxenye izicucu. Inyama kufanele cishe 0.5 kg, futhi usadinga ucwecwe wokubhaka. Ngomqondo onabile, ungalungisa lokhu isidlo ngaphandle kwalo, kodwa ke kufanele mpahla lonke roll, engesiyo elula kakhulu, futhi ukupheka kubhayela double ukugwema iphele ukuphuma inyama. Ngaphezu kwalokho, inyama yenkonyana, wabhaka in ucwecwe izingcezu bese upheka ngokushesha, futhi uma uthumela ukubukeka umbukwane okuningi.
Inyama anqande kahle, ukwenza kube ithenda xaxa. Khona-ke, ucezu usawoti ngalinye ufafaze pepper. Okulandelayo, thatha ishidi elincane ucwecwe, kwasakazeka wageza asithena oqoshiwe, futhi phezu - the inyama yenkonyana futhi imvilophi zihambisana. Ungafuna ukubeka phakathi kwenye stud noma a sprig elincane Thyme ngoba ukunambitheka. Wabhaka inyama kuhovini ngokwanele ashisayo ngokulala ihora elilodwa, futhi bephethe amazambane puree, zemifino isaladi noma Ragout.
Kanjani ucezu eyosiwe inyama yenkonyana
Abaningi bakholelwa ukuthi okuwukuphela kwendlela ungakwazi ukupheka inyama yengulube, kodwa akulungile. Inyama yenkomo (futhi ikakhulukazi inyama yenkonyana) futhi inikeza umqondo omuhle kakhulu, kodwa-ke, kudingeka Adalberto isikhathi eside sihlale it kuhhavini futhi ngokukhalipha asondele udaba lokuzikhethela zamakha. Ukuze silungiselele lokhu dish udinga ukuthatha ambalwa wezipuni zamafutha omnqumo, 6 clove esikhulu garlic, Chili powder, usawoti kanye oregano ukunambitha, kanye nanoma yikuphi namakha inyama. Yiqiniso, kudingeka okwengeziwe yenkomo. Bhaka -ke kungaba kunye nalo mbandela ukuthi kuyoba ukuma ucishe njalo, kuhle - hhayi ngaphezulu kuka-20 cm selilonke.
Inyama obsushivayut ukugeza izindwangu, usike wonke amabhayisikobho kanye emithanjeni, uma ngabe zikhona. Ngaphezu kwalokho, ubude lonke zezinhlamvu kuyadingeka ukuze nisike ka ngamasentimitha ambalwa ukujula transverse at ibanga 2-3 cm kusuka komunye nomunye. Babeka izingcezu nesweli (clove engcono ehlukana lengthwise ku 3-4 izingxenye). Khona-ke inyama bevela kuzo zonke izinhlangothi ngosawoti kanye nezinongo, ezibekwe esitsheni futhi bavunyelwe ukuba marinate kule esiqandisini (iyatholakala ebusuku).
inyama yenkonyana pickled asuswe esiqandisini, ukudonsa garlic. Thosa inyama nxazonke phezu hot uyithose pan ngamafutha kuze brown golden. Eceleni lapho baking akalilahlile umpe lwawo futhi benza akukhona okungenamizwa, kufanele zihambisana ucwecwe (okungcono ezelekene), kodwa hhayi uvalwe kakhulu. Lungiselela inyama uhlobo amahora mayelana 2 kuhovini kancane ukufuthelana (degrees bengekho ngaphezu kwama-120). Zisashisa emva ukulungela egcwele, epholile kancane, hhayi ukuze ngishiswa umusi.
Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka namanzi kakhulu, flavorful futhi ithenda inyama yenkonyana. Bhaka-ke kuvela ukuthi kulula kakhulu, nakuba, kuthatha isikhathi esiningi, kodwa umphumela uba esihle ngempela. Futhi kungenzeka ukuthi usebenzise kokubili ashisayo nabandayo, ukusika tincetu mncane.
Pancake on ubhiya. Indlela lokhu dish engavamile
Scones Homemade etafuleni ngalinye lomndeni
Imvubelo "saf-Moment": zokupheka kanye nokubuyekeza
Njengoba amazambane wabhaka iyisitshulu nge amakhowe ukhilimu omuncu e multivarka?
Wamafutha chiriya. chiriya Ikhaya Ukwelashwa
Imifula Ivanovo esifundeni. Yini emfuleni uku-Ivanovo esifundeni?
Ukucabangela indlela ukunamathisela ifilimu ocingweni
Ukugonywa ngokumelene namarabi inja
Indlela yokuhumusha isiphakamiso kusukela Russian isiZulu? imiyalelo iDemo
Izitsha Main inyama nengulube
Kusho ukuthini - ukubona ephusheni ukhulelwe? Yini iphupho - ekhulelwe?